Zọ ise dị mfe iji meziwanye agụ saịtị gị | Martech Zone
Otutu mmadu adighi agụ web saịtị na ụdị ahụ. Ndị mmadụ na-enyocha ihe ederede site na elu ruo na ala wee jide isiokwu, mgbọ, ihe oyiyi, isi okwu na ahịrịokwu ha na-ele anya. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkwalite ụzọ ndị na - agụ akwụkwọ si eri ọdịnaya gị, enwere ụzọ iji bulite nhazi gị.
Tinye ederede gbara ọchịchịrị na ndabere ọcha. Softdị agba ndị ọzọ dị nro nwere ike ịrụ ọrụ, mana ọdịiche bụ isi, yana font na-agba ọchịchịrị karịa ndabere.
Gbalịa ka ukwuu, ọmarịcha mkpụrụedemede. 'Lucida Grande' na-amasị m n'ihi na o nwere serifs. Enwere ihe akaebe na ndị mmadụ na-agụ site n'ụdị okwu, ọ bụghị site na akwụkwọ ozi, na serifs na-eme ka ikike nghọta kawanye mma.
Gbalịa ịbawanye ogo gị site na iji CSS iji nye ohere zuru oke maka ndị na - agụ ya ịgbaso usoro ederede na - agbaghị elu ma ọ bụ gbadaa akara.
Ikwesiri oke ocha gi dika okwesiri. Oghere dị n'akụkụ ọ bụla kwesịrị ịpụta site na ọdịnaya gị. Oghere dị n'etiti posts kwesịrị ịbụ karịa ohere dị n'etiti isiokwu na post ọ bụ. Akara edemede maka ọdịnaya gị kwesịrị ibu karịa mkpụrụedemede maka njirimara iche iche nke blog gị. Oghere dị ọcha bụ isi na ezigbo saịtị na nnukwu ogugu.
Ahu nagide, obi ike, Italics na nchịkọta akụkọ n'ụzọ ziri ezi. Otu ederede nwere oke ederede ejiri mee ihe na-ewepụ ahụmịhe wee gbanwee ịdị mkpa nke ahịrịokwu nwere obi ike. Nye ndị ọrụ ngwaọrụ nke azụmaahịa iji bulie ahụmịhe ọgụgụ ha. Ndepụta ahaziri ka edepụtara ọdịnaya dị mfe ọgụgụ. Ndepụta dị ka nke a na-enye ndepụta ọgụgụ isi maka onye na-agụ ya.
Igodo nke njigide nke ọma na ọgụgụ isi na - eto eto bụ ikike ndị na - agụ akwụkwọ gị iji jigide ọdịnaya ha chọtara na saịtị gị. Nhazi gị, iji ebe ọcha, na iji ihe ederede ede ihe dị mkpa ị ga - eleghara anya.
Tags: ogugunke oguguọcha